travelrome Archives | Gcina A Isitimela
ekhaya > ukhenketho
Milan ukuya eRoma Ngololiwe iTrenitalia ku 3 hours
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu EMilan ukuya eRoma By Train okanye eRoma ukuya Milan kuyinto engamava lula kakuhle. Hayi umzekelo-icatshulwe beautiful! Ungathatha uloliwe ongabizi mali ininzi kunokuthatha ixesha elide kuneli 3 iiyure kodwa oololiwe abasuka eMilan besiya eRoma bakuvumela ukuba utsibe kwi…
Uloliwe kuhambo Italy, Travel Europe
5 Usuku Uhambo Ukusuka eRoma Ukuze Hlola Italy
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu ERoma sisixeko elihle, kodwa ngamanye amaxesha umhambi kunqwenelwa nentwana iintlobo. Abo yokuhlala eRoma elide ngokwaneleyo ukuba bacande kulo zinganqwenela mhlawumbi kujonga ejikeleza indawo, kakhulu. Ngethamsanqa, yiyo iihambo namhla ukuba! Ukuthathela ingqalelo indlela efanelekileyo…
Uloliwe kuhambo Italy, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Umsele-moya ukuze kuloliwe aze ahambe Europe ukuba Wonder Weekend. Gcina A Uloliwe yenza kube lula ukuba ukubhukisha kwimizuzu kungekho ntlawulo zafakwa, ukuze bafumane imali yakho imisebenzi! Nazi izinto esizikhethayo kwiindawo ezigqibeleleyo zokuya eYurophu…
Apho Ukuze Jonga 'Umdla Street Art EYurophu
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu art Street luhlobo mihla zokuvakalisa ezobugcisa eyenza izixeko zethu ezintle kakhulu. A mzobo olungileyo isitalato Kwakhona ayasivuselela ukuba ucinga ngento ebaluleke ngokwentlalo okanye kunikhumbuza imisebenzi yeenkosi yamandulo. Cities of Europe azele…
Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu iihotele Historic eYurophu akukho emehlweni esinqabileyo, ingakumbi kwiidolophu ezinkulu nge ubutyebi bembali. Paris, London, eRoma, eMunich, Vienna - zonke ezi zixeko kufuneka iindawo ezithandekayo ukuba anikele. Abakhenkethi abanqwenela ubunewunewu bemveli abayi kuba nangxaki ekufumaneni indawo…
Business ahambe ngetreyini, Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, ...
Yintoni To Do In eYurophu In February & Iindawo ezinika umdla Tips
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Abahambi amabombo eYurophu ngoFebruwari kunandipha ezinye izinto best yelizwekazi ni matimba ku tlula-free, kuquka iindawo ezinkulu ezifana Steps Spanish kunye Tivoli Gardens. EyoMdumba into elifut-: indawo elithozamisayo phakathi ngexesha leeholide ezixakekileyo breakers yasentwasahlobo. ukuba…
Iindawo ezinika umdla zotyelelo Star To Ukutyelela The Vatican City
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ukuba uhlala eYurophu yaye umelwe kukuba ube impelaveki onga (okanye i lonke ngeveki!), bathi “ewe” ku Ukutyelela Vatican City nge koololiwe yaye sibunandiphe ngesantya ngokupheleleyo! Eli nqaku labhalelwa ukufundisa ngoTyelelo loLoliwe kwaye yenziwa nguSave…
Uloliwe kuhambo Italy, Iingcebiso zokuhamba
5 Amazing Coffee Iivenkile Kufuphi Train ipetroli In Italy
yi Yulia Egudin
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Italy ngokuphikisana unawo coffee inkcubeko omkhulu emhlabeni. Ilizwe lokuqala zaseYurophu ukungenisa ikofu eYiputa, Italy iye cafes ngempumelelo ukususela kwiNkulungwane 16, kwaye namhlanje siza kukucebisa ku 5 iivenkile zekofu emangalisayo kufuphi kwizikhululo zikaloliwe in Italy. Oku kubhaliwe…
Ukuhamba usuka eRoma ukuya eParis NguTreyspeed Uloliwe
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Paris neRoma phezulu kuluhlu emele phantse yonke yabahambi. Le mizi lubalaseleyo ithandwa ukuba inkcubeko yabo, cuisine-class umhlaba, izakhiwo obumangalisayo lukhulu ngakumbi. Nangona eRoma Paris echaselene, kokuba uxhume kakuhle kakhulu ngololiwe. Ithetha ukuba…
Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Iingcebiso zokuhamba
Top 5 Uninzi uhambo Ukuqeqesha Romantic EYurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Enoba sele nditshatile iminyaka, okanye ngxi kwizigaba zokuqala ubuhlobo, zonke isibini ungazuza ixesha elichithwa kunye. Kumnandi kakhulu ukuze wenze umgudu ukuze nosuku lweValentina. Ukuhamba ngololiwe yindlela egqibeleleyo ukuqalisa…
10 Iindawo zokuHamba ngeXesha elingaphandle kweHlabathi kwihlabathi liphela
Zeziphi izikhumbuzo oza nazo kuhambo?
12 Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu
10 Uninzi lweekhosi zeScenic Golf eYurophu
10 Utywala Utywala Ukuzama kwihlabathi liphela